Kabayizwa eyokuxhaswa ngezigidi kweMaritzburg
ABADLALI beMaritzburg United ikusasa labo elingaziwa uma iqembu lihluleka ukuthola abaxhasi. Isithombe: Twitter/Maritzburg United
Bongani Hans | January 8, 2021
IMARITZBURG United enezinkinga zemali kungenzeka ingalutholi uxhaso lukaR48 million lweminyaka emithathu elucele kuMasipala uMsunduzi, eMgungundlovu, nawo obhekene nezinkinga zemali njengoba umkhandlu usatshiswa ngokuthathelwa izinyathelo zomthetho uma uvuma lesi sicelo..
Ngokusho kweMeya yoMsunduzi, uMzimkhulu Thobela, leli qembu lePremier Soccer League (PSL) libabhalele ngo-Okthoba licela ukuxhaswa ngoR15 million, okuyimali le nhlokodolobha yaKwaZulu-Natal engenayo.
Nokho usihlalo we-United, uFarook Kadodia uthe empeleni iqembu licele imali enguR48 million weminyaka emithathu.
Kuke kwabikwa ukuthi ngenxa yomthelela kwezomnotho weCovid-19, uKadodia uke wacabanga ngokulidayisa iqembu.
UThobela uthe udaba luqale ukudingidwa wumkhandlu ngasekupheleni konyaka odlule, lwachithwa. Uthe umkhandlu ngokwawo ukhamekile ngasezimalini, nawo udinga ukuxhaswa ngoR10 billion ukuze ukwazi ukugcina izidingo zokuletha ingqalasizinda.
Udaba lokuxhaswa kweqembu lubuyelile kwebekubhungwa ngazo emhlangaweni wangoDisemba 15 obubanjwe kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje.
Kuthiwa lokhu kucasule inhlangano yabakhokhintela iMsunduzi Association of Residents, Ratepayers and Civics (MARRC), ekholwa wukuthi idolobha kumele lisebenzise imali ezintweni ezibalulekile kunokuxhasa iqembu lebhola.
Phambilini lo masipala ungenelile ngokuxhasa i-United ngezigidi ngemuva kokuvela kwezindaba zokuthi ingase ifudukele kuMasipala iNelson Mandela Bay ngenxa yakho ukuntula imali.
UKadodia uthe ukufinyelela esiphethweni koxhaso lweminyaka emithathu umasipala obelufaka, olube ngu-R29.5 million, kusho ukuthi iqembu selizodonsa kanzima.
Uthe usexhumane nosomabhizinisi abaningi abazimele ecela uxhaso kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Eminyakeni emine sengibe nezicelo ezimbili kodwa ngoba bebefuna ukuthi iqembu lifuduke nganqaba. Sengikwenzile okusemandleni futhi abantu kumele bazi ukuthi lokhu akukho mayelana nokuthi iMaritzburg United ithatha uR16 million ngonyaka. Iqembu lizobuyisela uR8 million kwidolobha,” kusho uKadodia.
Uthe uR15 million owokubheka izidingo zokuphathwa kweqembu kuthi uR1 million ube owezinhlelo zomphakathi.
Uqhube wathi kuwumqansa ukuthi amaqembu aKwaZulu-Natal athole abaxhasi.
UThobela uthe yize idolobha lingenayo imali, kumele kube khona elikwenzayo ukusiza iqembu njengoba likwazile ukubeka idolobha labo ebalazweni lasiza nokukhulisa umnotho.
IMARRC ebikhona emhlanganweni wangoDisemba 15, ngoJanuwari 4 walo nyaka, ibhalele uThobela, imenenja kaMasipala uMadoda Khathide, nesikhulu esiphezulu sezimali (CFO), uNelisiwe Ngcobo, icela ukuthi sishaywe indiva isicelo seqembu njengoba nomasipala unezawo izinselelo eziphazamisa izinhlelo zokuthuthukisa umphakathi ngoba nawo awunayo imali. Le nhlangano ithe kuyaxaka ukuthi umkhandlu uze uzihluphe nokuyifaka ezihlokweni ezizodingidwa le ndaba.
“IMARRC iyasichitha lesi sicelo futhi inxusa umkhandlu ukuthi usiguqule lesi sinqumo. Iyagcizelela nokuthi kubuyelwe ekutheni ingaxhaswa iMaritzburg United Football Club,” ifundeka kanje ingxenye yencwadi yeMARRC.
Leli dolobha eminyakeni edlule lilokhu liphuma lingena ngaphansi komlawuli ngenxa yokuhluleka wukuletha izidingo zomphakathi kangangoba uNdunankulu uSihle Zikalala uze waxosha amalunga ekomiti eliphezulu, wafaka elisha eliholwa uThobela.
IMARRC ithe imali ecelwa yi-United kumele isetshenziselwe ukulungisa “amanzi avuzayo, izizinda zikagesi, imigodi emigwaqweni, ingqalasizinda nokulungisa i-SAPS noma kuxhaswe imindeni entulayo ngenxa yeCovid-19 nokuvalwa kwezwe”.
Ekhuluma ne-Independent Media Investigations Unit, usihlalo weMARRC, u-Anthony Waldhausen, uthe imali efakwa kwi-United bazoyithatha njengemoshiwe.
“Inkinga yalo masipala wukuthi awukwazi okumele ukubeke phambili. Ulungisa ingqalasizinda endala esikhundleni sokwakha kabusha ukuze ibe yintsha. Isiteshi sikagesi siqhumile emasontweni ambalwa futhi ugesi awukabuyi,” kusho Waldhausen.
UThobela uthe umkhandlu awukanqumi ngokuxhaswa kwe-United kodwa “ngokwami ngingaluleka” ukuthi umkhandlu usibheke isicelo.
“Emhlanganweni wokugcina womkandlu ngakusho ukuthi ukube ngangiyingxenye yomhlangano ngangizowululeka ngokuhlukile. Ngakho ngicela ukuthi udaba lubuyiswe, lubhungwe ngoba ngikholwa wukuthi umkhandlu kumele ubasize,” usho kanje.
Uthe ukweseka kwakhe iqembu yingoba yiyona kuphela into enhle idolobha elinayo.
“Ngokuhlanganisa umphakathi, alikho nelilodwa iqembu elihlanganise abantu bedolobha. Kuyenzeka uma iMaritzburg United idlala lapho ubona amakhulu ohlanga lwaseNdiya enkundleni, amakhulu amaKhaladi, abangaphezulu kuka-50 abamhlophe nenqwaba yama-Afrika bebhiyoza ndawonye,” kusho uThobela.